Waa maxay ujeedada Maraykanka ee qaaradda Afrika? - BBC News Somali
Image caption Madaxweynaha Naigeria Muhammadu Buhari wuxu ahaa hogamiyihii u horeeyay ee booqda Aqalka Cad itan iyo markii la dortay Donald Trump
"Aad ayay u fogayd markii ay maal-gashatadu soo garaaceen albaabka, qaaradduna ay albaabada furtay, qofka kaliya ee halkaas taagnaa waa shiinaha", sidaas waxa BBC-da u sheegay Tibor Nagy, oo ah xoghayaha Maraykanka u qaabilsan arimaha Afrika.
Mr Nagy ayaa sheegay in uu doonayo soo celinta doorkii uu Maraykanku ku lahaa qaarada. "Shaqadaydu waa xaqiijinta marka albaab la qaraaco, in Maraykanku uu halkaa joogo, " ayuu yidhi.
"Koonfur Afrika, Shiinaha waxay ku leedahay diblomaasi heer sare ah - taas oo muujineysa inay runtii muhiim u tahay Beijing, " ayay tiri Lina Benabdallah, oo ah khabiir ku xeel dheer xiriirka Shiinaha iyo Afrika, kana tirsan Jaamacadda Wake Forest.
Image caption Marwada koowaad ee Maraykanka Melania ayaa la kulantay dhiggeeda Kenya Margaret Kenyatta
"Way adag tayay helista Afrika oo ay mudnaantu tahay maamulka," sida uu sheegay Eric Olander oo ah aasaasaha ururka Africa-China Project.
Xidhiidhka waxaa sii xumeeyey warbixinada ay mas'uuliyiinta Maraykanku kaga hadlaan qaarada Afrika, kuwaas oo loo arkay inaysan munaasib ahayn.
Madaxweyne Trump ayaa u isticmaalay ama ku tilmaamay qaarada Afrika "shithole countries"(Eray aflagaaddo ah), halka qaaradda sidan loo caayay ay tahay goobta ay doonayaan Trumo saaxiibadii in ay ka taajiraan.
"Waxaan u arkaa tartanka ka imaanaya wadamada kale oo kor u sii kacaya, waqtiyadii danbe," sidaas waxaa tidhi Benabdallah.